Imifuno yeeProteni zemveliso - China Iiproteni ezivelisa imifuno, abaxhasi
Iiprotheyini zesoya ezinombala
OIprotheyini yesoya eyenziwe ngombala iveliswa ngezixhobo ze-extrusion ezingeniswe zivela e-US kunye nomgangatho ophezulu wasekhaya ongasogqithiso lweembotyi zesoya kunye neprotein yesoya njengezona zinto ziphambili ezenziwayo. Imveliso ibonakaliswa ngokuthungwa kwenyama eluhlaza. Mnat ithatha ubungqingqwa obunemicu kwaye ithathe indawo elungileyo, ukutyeba kunye nokuhlafuna inyama emva kokubuyiselwa emzimbeni. Ingacutshungulwa ibe yimicu okanye iziqwengana ezinesibethi okanye inqunube emva kokuntywila. Iproteyini ebunjiweyo yesoya inokusetyenzwa kwakhona ibe ngamacwecwe, imicu okanye iityhubhu, ezibonisa ukuthungwa kwemisonto kunye nokuhlafuna kwenyama.
Iipakethi zesosi yeSoy, Iibhiskithi zaBantwana, Ukutya amandongomane anetyuwa, Intonga yeBhontshisi entsha, Ikhukhi yeLadyfinger, Umtya weHawthorn,